संपादकीय बोर्ड मा बोह्राक्रान्ज। हाम्रो सिफारिस
सुरु आफैलाई उपकरण ड्रिल कलर
Amazon Store बाट ड्रिल गर्नुहोस्
1 ड्रिल कलर - यो-अप-वेयरर्सका लागि आदर्श उपकरण
2 सुरक्षा पहिले
3 खरिद गर्ने सट्टा किराया
4 मेगा ड्रिल बिट प्रयोगमा
5 मार्केटमा विभिन्न किसिमहरू उपलब्ध छन्
6 उदाहरणको लागि, यी सेट सिफारिस गरिएका छन्:
7 व्यक्तिगत ड्रिल बिट्स केही अनुप्रयोगहरूका लागि पर्याप्त छन्
8 गुणवत्ता लामो अवधिमा भुक्तान गरिरहेको छ
der ड्रिल कलर - को लागि आदर्श उपकरण yourselfer
को लागि आदर्श उपकरण yourselfer छ ड्रिल कलर, धेरै अवस्थामा तपाईसँग एक परिपत्र छेद छ ड्रिल , यो तपाईं एक सुस्त, एक को लागी संलग्नता भन्दा अगाडी बढि मद्दत गर्नेछ रोटरी हथौडा, वा एक ताररहित पेचकस, कुनै पनि कुरा हो कि सेनेटरी क्षेत्र, फर्नीचर या पर्खालहरु मा, जहां एक गर्तिका को लागि एक सही छेद या पाइप को निर्माण गर्नु पर्छ। ड्रिलको-के-आफ-आफैको लागि ड्रिल बीच एक भेद हुनु पर्छ, छेद देख्यो र ड्रिल बिट।
अनुभवीको रूपमा yourselfer तपाईं निश्चित रूपमा यी जस्ता परिस्थितिहरू परिचित हुनुहुन्छ: तिनीहरू आफ्नै घरको निर्माण र पेशेवरहरूको हेरविचार गर्न चाहन्छन। उदाहरणको लागि, धेरै पाइपहरू रूट गरिनु पर्छ र पर्खालहरु को माध्यम ले आंतरिक र बाहिरी इलाकों मा निर्देशित गर्नु पर्छ। वा हरेक कोठामा धेरै स्याकेटहरू स्थापित गरिन्छन्।
अथवा तपाईं आफ्नो अपार्टमेंट मा आफ्नो अपार्टमेंट को पर्खाल मा परिपत्र खोलन हुनु पर्छ ड्रिलतपाईंको कम्प्युटरलाई तपाईंको गृह कार्यालयको नजिकैको कोठामा जडान गर्न। भान्सामा सिंकको सिंकमा कैबिनेट पर्खालको माध्यमबाट ड्रेन पाइप राख्न तपाईंलाई एक छेद चाहिन्छ। यी सबै र धेरै अन्य अवस्थामा ड्रिल कलर लागि yourselfer एकमात्र उपकरण जसको साथ तपाईं एक पेशेवर जस्तै इष्टतम समाधान चलाउन सक्नुहुन्छ। ह्यान्डम्यानको लागि लाभ स्पष्ट छ: तपाई ड्रिल र साथ काट ड्रिल कलर एक अपरेसनमा र चाँडै आफ्नो कर्तव्यहरू प्रदर्शन गरेको छ।
विभिन्न सामग्रीको विभिन्न उपकरण चाहिन्छ
स्थितिमा निर्भर गर्दछ yourselfer एक कटर, जो पुरा तरिकाले दीवार देखि छेद को वांछित आकार को कटौती गर्दछ। यस कारणको लागि, विभिन्न प्रकारका आकारको ड्रिल रेजहरू विभिन्न प्रकारका छन्। यदि तपाईं एक पर्खालमा पूर्ण प्वाल बनाउने समस्याको साथ प्राय: सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले एक सेट अप्ट गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं धेरै परिस्थितिहरूको लागि राम्रो तरिकाले सुसज्जित हुनुहुन्छ।
छेदको वांछित आकारको अतिरिक्त, तपाईंले कटौती गर्नु भएको भवन निर्माणलाई महत्त्वपूर्ण महत्वको रुपमा राखिएको छ। त्यहाँ भित्ताहरू जस्तै ईटा, कंक्रीट र टाइइल्स, साथै काठको रूपमा नरम सामग्री, उदाहरणका लागि चिपपबोर्ड वा प्लाईवुड, ओएसबी बोर्ड वा जिप्सम प्लास्टरबोर्ड वा स्टुकोको रूपमा कठिन सामग्रीहरू छन्।
सामान्यमा यो भन्न सकिन्छ yourselfer को ड्रिल कलर नरम सामग्रीको लागि अवस्थित अवस्थाको आधारमा, कठिन सामग्रीको मानक चिनियाँको लागि ईट ड्रिल बिट र विशेष गरी कठिन सामग्रीको लागि यानी कंक्रीट, ढुङ्गा र टाइलहरू हीरा ड्रिल बिट जस्ता ईन्टरनेटको लागि। काठको लागि yourselfer होल आरी।
अनुप्रयोगमा, यी सबै उपकरणहरू समान छन् किनकि तपाईंले सजिलै आफ्नो ड्रिलमा एट्याच्मेन्टको रूपमा राख्नु हुन्छ र त्यसपछि तिनीहरूलाई पर्खालमा राख्नुहुन्छ।
सिद्धान्तमा, तपाईं ड्रिलको साथ पर्खालमा छेद बनाउनुहुनेछ। यो समय यो एकदम ठूलो हुनेछ।
ड्रिलको साथ कुनै पनि प्रयोगको रूपमा, तपाईंले विचार गर्नु पर्छ yourselfer सुरक्षित तरिकाले उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। पहिलो, त्यहाँ दीवारमा बिजुली तारहरू छन् कि जाँच गर्नुहोस्। त्यसपछि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ yourselfer काटन उपकरण।
अर्को चरणमा, यो सामान्य, नरम वा धेरै कठिन सामग्री हो कि विचार गर्नुहोस्। पछिल्लो अवस्थामा, गीला ड्रिल गर्न पक्का हुनुहोस्। पत्थर, कंक्रीट वा टाइल जस्ता सामग्रीको लागि, विशेष गरी बलियो घर्षण हुन्छ।
निर्माताहरू यसका लागि चालाक समाधानको साथ आउँछन्। त्यहाँका लागि छन् ड्रिल कलर स्पंज राख्नु यो पहिले पानी मा राखिएको छ जब सम्म यो पुरा तरिकाले संतृप्त छ र त्यस पछि ड्रिलिंग प्रक्रिया को समयमा पानी को निर्वहन गर्न सक्छन्। गीली ड्रिलिंगको समयमा वांछित शीतलन प्रभाव प्राप्त गर्न सरल तर प्रभावकारी विचार।
सबै अन्य सामग्रीको लागि, सामान्य कोठा हावा तातो दौडबाट ड्रिल रोक्नको लागि कूलिंगको लागि पर्याप्त छ।
गीली ड्रिलिङमा, सुरक्षामा ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ। एकै ओर, तपाईं ड्रिलिंग को समयमा पानी लीक तथ्य को बारे मा जान्नु पर्छ। यसकारण, सावधान रहनुहोस् कुनै पनि केबलहरू वरिपरि झूटो बोल्न अनुमति नदिनुहोस्, वा बिजुली आउटलेट प्रवेश गर्न स्प्लैशिंग पानी। यो बिना बोल्छ कि कुनै बिजुली को जमीन मा प्रवाह को अनुमति छैन।
अर्कोतर्फ, प्रत्येक ड्रिलिंग प्रक्रिया माटो बनाउँछ। भन्दा yourselfer तपाईं सानो उडान चिप्स वा बिल्टबाट भित्ता वा टाइलबाट बिट्सको जोखिम चलाउनुहुन्छ। यसकारण तपाईंले सुरक्षात्मक चश्मा, एक धूल मुख र उपयुक्त काम दस्ता्ने लगाउनु पर्छ। यदि तपाईं जस्तै yourselfer आफ्नै निर्माण स्थलमा काम गर्ने कामको काम र एक हेलमेट पनि समावेश गरिएको छ।
खरिद गर्ने सट्टा किराया
तपाईले लगानी गर्न चाहानुहुन्छ कि यो-यो-तपाईंकोselfer निर्भर छ कि तपाइँ कतिपय तपाइँलाई पर्खाल वा क्याबिनेटमा छेदहरू काट्नु हुन्छ। र निस्सन्देह, तपाईंको निजी बजेट निश्चित छ।
यदि तपाइँ एक सानो फ्लैटमा सेलर बिना बस्नुहुन्छ भने, तपाइँ सँग चीज भण्डार गर्न सीमित क्षमता छ। परिचित सर्कललाई सोध्न को लागी कि कसैले तपाईंको लागि घर हो कि भनेर सोध्नुहोस् ड्रिल कलर उधारो हुनेछ यदि यो मामला होइन भने, हेर्नको लागि तपाईको स्थानीय DIY भण्डारमा जाँच्नुहोस् कि तपाइँ एक सानो भाडा शुल्कको लागि उपकरण भाडामा राख्न सक्नुहुन्छ।
सबै अन्य DIYers को लागि, तथापि, निम्नलिखित सच छ: एक ड्रिल आधारभूत उपकरण संग सम्बन्धित छ, अतिरिक्त ड्रिल बिट ले कम ठाँउ लेता छ र एकदम छेद को लागि एक अपरिवर्तनीय उपकरण छ।
मेगा ड्रिल बिट प्रयोगमा
मार्केटमा विभिन्न किसिमहरू उपलब्ध छन्
यदि तपाईं एक do-it-yourselfer को रूपमा एक ड्रिल खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं विभिन्न मोडेलहरू बीच छनोटको लागि खराब छन्। यो दायराले पेशेवरहरूको लागि कहिलेकाहीं प्रयोगको लागि सस्ता मोडेलमा अनुलग्नकबाट विस्तार गर्दछ।
पहिले नै वर्णन गरिएमा, स्थितिको आधारमा तपाइँलाई आफ्नो ड्रिलको लागि विभिन्न संलग्नकहरू आवश्यक पर्दछ। विशेष रूपले कठिन परिस्थितिहरु जस्तै कंक्रीट, टाइल्स, काँध, प्राकृतिक पत्थर, ह्यामर ड्रिल बिट्स वा हीरा ड्रिल बिटहरू DIY स्टोर वा अन-लाइन प्रेषणमा उपलब्ध छन्। अन्यथा, एक सामान्य ड्रिल कलर वा ड्रिल बिट।
ड्रिल बिट्स र सामानको सेटको साथ दिइने एक राम्रो छनौट हो
यदि तपाईं यस्तो उपकरणको साथ पहिलो पटक काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो एक सेट खरिद गर्न कडा अनुशंसित छ। मिल्दो ड्रिल बिटको अलावा यो पनि आवश्यक सहायक उपकरण जस्तै केन्द्र ड्रिल र एडेप्टरहरू समावेश गरियो। सटीक कार्यको लागि केन्द्र ड्रिल अनिवार्य छ, उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ पङ्क्तिमा धेरै स्याकेटहरू संलग्न गर्न चाहनुहुन्छ र यो सही दूरीमा निर्भर गर्दछ। एडाप्टर संग, तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि तपाइँको नयाँ खरिद गर्ने उपकरणले तपाइँको घरमा ड्रिल फिट गर्दछ र ड्रिलिङ प्रक्रियाको समयमा सुरक्षित रूपमा राख्छ।
यदि तपाईंलाई विभिन्न आकारका धेरै प्वालहरू ड्रिल गर्न आवश्यक छ भने तपाइँलाई सानो वा ठूलो तल्ला चाहिन्छ। भविष्यको लागि पनि, तपाईं सधैं सबै प्रकारको कामको लागि सुसज्जित हुनुहुन्छ र नयाँ काटन उपकरण खोज्ने समय बर्बाद गर्न आवश्यक छैन। त्यसैले सेटको खरिद DIY उत्साहीहरूको लागि पुरानो हो।
उदाहरणको लागि, यी सेट सिफारिस गरिएका छन्:
निर्माता लक्स टाइल, पत्थर र चिनाईको लागि लक्स-उपकरण ड्रिल बिट सेट 6-teilig ड्रिल बिट्स सेट गर्दछ। 68 मिमी र 82 मिमी व्यास, एम 16 मुद्दा, व्यास आठ मिमी दुई एचएम केंद्रित र एम 16 मुद्दा संग एक हेक्सागोनल एडप्टरका साथ एक एसडीएस-एडेप्टरको therein दुई बिट समावेश छन्। 30 को लागी, - यूरो तपाईं घर सुधारको लागि सस्तो विकल्प खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। एक व्यावहारिक अतिरिक्त को रूप मा, लक्स एक सेट मिलान मेल एल्युमिनियम मामले में बचाता है।
कंक्रीटका लागि, ढुङ्गाका पर्खाल र टाइलले पनि निर्माताले लक्स ड्रिल बिट सेट क्लासिक। सामान्यतया, यो सेनेटरी क्षेत्र वा बिजुली क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ, उदाहरणका लागि पाइप सफलताको लागि वा स्याकेटका लागि कम-सेयर प्लगहरूको स्थापनाको लागि। शामिल 62 मिमी व्यास र 82 मिमी को एक व्यास संग एक ड्रिल बिट हो, जसमा प्रत्येक को 50 मिमी को एक ड्रिल गहराई छ। ड्रिलिंग मिसिन बिना प्रभाव ड्रिलिंग को लागी यो उपयुक्त छ। सेट एक व्यावहारिक भण्डारण बक्स मा आउछ र 25 को आसपास लागत - यूरो।
चाँडै काम गर्न सक्षम हुनाले, लक्समा एसडीएस प्लस रेकर्डिङ छ। यसले तपाइँलाई ड्रिल बिट बिना उपकरणहरू पूर्ववत गर्न अनुमति दिन्छ, किनभने यो विशेष आकारको grooves सँग बनाइएको छ।
Craftomat आफ्नो क्राफ्टमेट छेद देख्यो मामला संग सात भागहरु को एक सेट शुरू गर्दै छन्। समावेश अनुहार ईंट, टाइल, वातित कंक्रीट र नरम रक को लागि उपयुक्त छ। लागि 37 बारेमा, - यूरो तपाईं एक व्यावहारिक मामला 33 मिमी, मिमी 53, 67 मिमी, मिमी 73 र 83 मिमी को सम्बन्धित diameters संग कडा धातु बनेको पाँचवटा प्वाल आरी समायोजित प्राप्त गर्नुहोस्। यसको अतिरिक्त, माउन्ट फ्लाइङ्ग र एक केन्द्रित बिन्दु समावेश गरिएको छ। यसको अलावा, 8 मिमी र 110 मिमी व्यास को दुई केन्द्रित अभ्यास र एक 13 मिमी हेक्सागन सकेट शामिल छ।
Toom को6यूरो को आसपास को मूल्य मा एक 40 टुकडा टाइल छेद ड्रिलिंग सेट छ। यो स्थापना बर्तन, गुफाको भित्ता सुक र जंक्शन बक्सहरूको लागि छेद ड्रिलिंगको लागि उपयुक्त छ। संग diameters 33, 53, 67, 73 मिमी, 10 मिमी केन्द्र ड्रिल र हेक्स रेन्च एक लागि प्राप्त प्लेट चार बिट समावेश छन्। एक विशेष सेवा टोम यस सेट मा दस वर्ष को गारंटी प्रदान गर्दछ।
के तपाईं काठमा ड्रिल गर्नु पर्छ? Craftomat तपाईंलाई 26 देखि 63 मिमी देखि लगभग आठ यूरो को विभिन्न दृश्य संग एक छेद दृश्य सेट प्रदान गर्दछ। हेक्सागोनल शंकले सबै मानक ड्रिल चकलाई फिट बनाउँछ। केबल नलिकाहरू, पाइप वा चििपबोर्डमा गुफा बक्सहरू, फाइबर बोर्डहरू, प्लाईवुड र सफ्टवुडको लागि 50 मिमी सर्कुलर उद्घाटनको एक गहिरो गहिराइमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
व्यक्तिगत ड्रिल बिट्स केही अनुप्रयोगहरूका लागि पर्याप्त छन्
यदि तपाईंलाई कहिलेकाहीँ प्रयोगको लागि ड्रिल बिट चाहिन्छ भने तपाईले पहिले नै दस यूरोको मूल्यको लागि सस्तो मोडेलहरू पाउनुहुन्छ। उदाहरणको लागि, 43 मिमी व्यासको साथ एक ड्रिल बिट लगभग आठ यूरो र 33 मिमी को व्यास7यूरो को साथ। यसको अतिरिक्त, तपाईं केन्द्रित ड्रिल र ड्रिल बिट धारक को लागी लगभग 30 यूरो को लागत को अनुमान लगाउनु पर्छ। त्यहाँ 12 यूरो देखि 33 मिमी व्यास देखि ड्रिल बिट को लागि एक एकीकृत केन्द्र ड्रिल संग 103 यूरो को लागी LUX छ।
Craftomat बाट, त्यहाँ एक 20 मिमी व्यास संग एक छेद देखेको छ, जो तपाईंलाई काठ, पाना, एक्रिलिक र अन्य प्लास्टिक र drywall बोर्डहरूमा राम्रो खुल्ला साना खुट्टा को अनुमति दिन्छ। HSS-centering drill र hexagonal shank को माध्यम ले, तपाईं सुरक्षित तरिका को बारे मा आठ यूरो को लागि काम गर्दछ।
बाट चयन गर्नका लागि, तपाईंसँग 33 मिमी देखि 83 मिमि सम्मको दायरामा व्यक्तिगत ड्रिल बिट रहेको छ र पसल काउन्टरमा 13 र 20 यूरोको बीचमा राख्न सकिन्छ। अतिरिक्त उपकरण अझै पनि आशा गरिएको छ।
मध्य मूल्य खण्डमा, बोस्चले तपाईंलाई राम्रो गुणमा ड्रिल बिट प्रदान गर्दछ। ड्रिल बिट प्रो SDS-plus-9 बोस्सेबाट कोरकोर तपाईं 68 मिमी व्यासको साथ कंक्रीट, चिनाई र रेत-लिने ईटामा स्विच सु्यासहरूको लागि खुल्ला कटौती गर्न सक्नुहुन्छ। कडा मेटल, जसबाट ड्रिल बिट बनाइएको छ, स्थायित्वको प्रतिज्ञा गर्दछ। त्यहाँ 100 वरिपरिका लागि ड्रिल बिट खरिद गर्न सकिन्छ - यूरो। यो तपाईंको ड्रिल मा SDS-plus या हेक्स-गर्तिका रिसेप्टर संग संयोजन मा आउछ।
एक छेद Bosch देखि देख्यो, पावर बहु ​​निर्माण 30 मिमी को व्यास संग, तपाईं को बारे मा 30 यूरो को लागि खरीद सकते हो। धेरै केन्द्रित अभ्यासहरूको लागि उपयुक्त, ड्रिल कलरलाई बोस् पावर एडाप्टरको साथ सुसज्जित छ। तिनीहरूले पीवीसी, काठ र काठको सामग्री र ईंटहरू जस्ता नरम सामग्रीहरूमा काटिएका थिए। यो 60 मिमी को ठूलो कटौती गहिराई मा परिणाम।
गुणवत्ता लामो अवधिमा भुक्तान गरिरहेको छ
राउन्ड cutouts को लगातार ड्रिलिंग को लागि - उदाहरण को लागी तपाईंको घर निर्माण मा - तपाईंले राम्रो गुणवत्ता मा ध्यान दिनु पर्छ। निर्माणका लागि कुन प्रविधि ल्याउने भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। कारीगरहरूलाई सोध्नुहोस् कि तिनीहरू कुन किसिमको ड्रिलिंग चाहन्छन्। प्रोफेसरहरूको धेरै वर्षको अनुभवबाट लाभ उठाउनुहोस् र उनलाई ड्रिल कलरको बारेमा सोध्नुहोस् जसको साथ उनीहरूको उत्तम अनुभव छ! निस्सन्देह, तपाईं बाउमर्कट लाई पनि परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, जसले कलरलाई सिफारिस गर्दछ।
राम्रो गलत ठाउँमा छैन। त्यसोभए उनीहरुसँगको सम्बन्धमा उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। या यो अब एक काटने को उपकरण को रूप मा अधिक तीव्र नहीं छ र छेद frayed छ। प्रत्येक चाकू जस्तै, स्थायी उपयोगको लागि एक ड्रिल कलर प्रयोग गरिन्छ। तपाईंले किन्नु अघि, सम्झनुहोस् कि एक ड्रिल कोरले पनि यो राम्रो प्रदर्शन गर्नेछ: तपाईं काठमा मात्र छ, तर पनि पत्थर, टाइल्स र पनि कंक्रीटमा छड्काउनु हुनेछ!
तथापि, किनकि ड्रिल कलरलाई काम गर्न सकिँदैन र ती चाँडो इस्पातको साथ चाकूको रूपमा तीव्र बनाइन्छ, धेरै समय पछि कुटाइन्छ। उच्च गुणस्तर काट्ने उपकरण पनि एक निश्चित मोटाई छ, जुन तपाईं धेरै वर्ष को लागि राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि, उच्च गुणस्तर ड्रिल बिटको साथ, काम सजिलो छ र छिटो छ।
एस एन्ड आर खोखला कोर बिट सेट Ø 68mm एसडीएस प्लस एडाप्टर 110mm र केन्द्र ड्रिल 8x110mm संग। हमर प्रभाव प्रतिरोधी, संकेतक ड्रिल गर्न सक्छन्
निरन्तर व्यावसायिक प्रयोगको लागि व्यावसायिक गुणमा एस एन्ड आर हथौड़ा खोल्ने ड्रिल बिट
आवेदन: चिन्तन, प्राकृतिक पत्थर, स्यान्डस्टोन, कृत्रिम पत्थर, कंक्रीट, संगमरमरको लागि; अप्ठ्यारो गुणको साथ सामग्रीको लागि उपयुक्त छैन, जस्तै चूना पत्थर
फाइदा: ह्यामर-प्रतिरोधी, छिटो ट्यापिंग, ड्रिलिङ क्षमता बढ्यो। निर्माण संयोजन गर्न सजिलो, हल्का वजन, सजिलो र छिटो
सेट: कोर कटर - व्यास 68 मिमी, काम लम्बाइ 50 मिमी, कुल लम्बाइ 72 मिमी, एसडीएस प्लस एडप्टर 110mm (मुद्दा M22), केन्द्र 8x110mm
मिसिनहरु: एसडीएस प्लस माउन्टिंग संग2देखि4किलो देखि रोटरी हथौडियां
Wolfcraft छेद देख्यो 7-भाग सूचक
sockets, distribution boxes र cavity boxes राख्नुको लागि
कटौती गहिराइ: 33 मिमी
केन्द्र ड्रिल: ओ 8 मिमी
7 द्रुत रिलीज इन्टेट्स र 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 मिमी।
कार्यको लम्बाइ: 23 मिमी
Wolfcraft 3478000 Drillkit सेट HM-Sprinkled Display
उत्पादन आयामहरू: 5.5x6x22.5cm
सामग्री: 1 टुक्राहरू
Wolfcraft ड्रिल कॉलर मामला 7-Tlg। सामग्री:5ड्रिल कलर आवेषण, कट ँ 55, 33, 53, 68, 73 मिमी को 83 मिमी गहिराई एचएम-छर्कियो; संगोष्ठी प्लेट र केन्द्र ड्रिल संग; प्लास्टिकको मामलामा, 3464000 प्रदर्शन
रङ: कालो र हरियो
सामाग्री: टंगस्टन कार्बाइड कोटिंग संग धातु
कटौती गहिराइ: 55 मिमी
सबै स्थापना कार्यको लागि (सकेटहरू, जंक्शनहरू बक्सहरू, पाइपहरू)
होल आरा सेट, 17 ब्लेड टुक्रा (13-19mm), 152 ड्रिल बिट,2प्लेट, 1 एलन कुञ्जी, सॉफ्टवुड, pvc प्लेटहरू र प्लास्टिक शीट.डिस्प्लेको लागि आदर्शको साथ Xter, 1 tlg होल किट देखा।
17 पीसीएस एक्सेसोरिज - मेटरक होल आरा किटमा2पीस मन्ड्रेल्स, 1 पीस माउन्टिंग प्लेट, 1 पीस हेक्स कुञ्जी र 13 पीस आरा ब्लेड, अधिकतम आकार 152mm (6 "), न्यूनतम 19mm (3 / 4") चाहिन्छ, पत्राचार गर्न सक्दछ
उच्च गुणवत्ता - तातो उपचार र कालो कार्बन स्टीलबाट बनेको, मेटरक होल सॉले उच्च प्रदर्शन, रस्ट रोक्ने, टिकाउपन र लामो जीवनको फाइदाहरू प्रदान गर्दछ।
उच्च प्रेसिजन - एक चाँडो र क्लीनर काट्नका लागि अल्ट्रा-शार्प दाँतको साथ बृद्धि गरिएको डिजाईन, सफ्टवुड, प्लास्टिकका पानाहरू, प्लास्टरबोर्ड र पातलो पीवीसी पानाहरूका लागि आदर्श। वार्मिंग सल्लाहहरू, कार्बाइड, हार्डवुड, घनत्व बोर्डका लागि उपयुक्त छैन।
पोर्टेबल भण्डारण - मेटरक होल साव किट सजिलो भण्डारण र संगठनको लागि कडा बक्सको साथ आउँदछ। यातायात गर्न सजिलो र सुविधाजनक। कार्य क्षमता सुधार।
प्याकेज सामग्रीहरू - 13 x टुक्रा आरा ब्लेडहरू,2x मन्ड्रेल्स, 1 x हेक्स कुञ्जीहरू, 1 x माउन्टिंग प्लेट, 1 x भण्डारण बक्स समावेश गर्दछ। गुणस्तर उत्तम, सेवा सर्वप्रथम, कुनै पनि समस्याहरू कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्, हामी सँधै तपाईंको लागि हौं।
Wolfcraft 8913000 1 ड्रिल एचएम, प्लग र प्ले, र 68 मिमी प्रदर्शन
समावेश गर्दछ: 1 केन्द्रित अभ्यास एचएम, ओ 8 मिमी, हेक्सागोनल शंकर संग
काट्ने गहिरो 55 मिमी
वुल्फक्राफ्ट 3465000 ड्रिल कॉलर HM-coated N67mmDisplay
वुल्फ्राफ्ट क्राफ्ट एक्सएनयूएमएक्स कन्ड्युट होलले एक्सेसरी HM-Strewn देख्यो? 3465000 मिमी
बोस् 6tlg। होल SetAnzeige काटन कार्य
कडा र नरम काठ, veneered काठ र लेप चिपबोर्ड को लागी उपयुक्त
हेक्सागनल शंक माउन्टका साथ सबै अभ्यासका लागि
पाइप प्रवेशका लागि, भेन्टिलेसन पाइपहरू र बाथरूम र भान्छाघरमा भेंटिलेसन स्थापनाका साथै स्विचहरू र जंक्शन बक्सहरूका लागि खाली प्वालहरू
कडा दाँतहरू र बलियो म्यान-कास्ट एल्युमिनियम शरीरको साथ
Wolfcraft 5480000 खोल कोर सूचक
पाइप सफलता को लागि र बिजुली फ्लश बक्सहरूको सेटिङको लागि
चिन्तन, प्राकृतिक पत्थरों, कृत्रिम पत्थरों, कंक्रीट, संगमरमर, टाइल, बलुआ पत्थर को लागि उपयुक्त
Ø 40 मिमी, काटन गहिराइ: 46 मिमी, एम 16 थ्रेड
डिजाइन: तनाव मंडल SDS-plus, प्रभाव प्रतिरोधी,2ईजेक्शन प्याज
समावेश गर्दछ: 1 ड्रिल, Ø 8 मिमी, एचएम
Wolfcraft 3894000 1 ड्रिल कलर एचएम ø 43 मिमी सहित शंकु र ड्रिल संकेत
अलग सामानहरू: केन्द्रित ड्रिल कला। no। 3862000 को लागि पर्खाल penetrations सम्म 240 मिमी सम्म
अघिल्लो लेखग्रिल थर्मामीटर
अर्को लेखNAS सर्भर